Tsiambaratelo momba ny famolavolana mailaka mamaly sy famoronana pejy fipetrahana | Famoronana an-tserasera
Fandinihana ireo tompony amin'ny famolavolana mamaly amin'ny marketing mailaka sy ny pejy fipetrahana
Manuel Ramirez | | Graphic Design, Famolavolana tranonkala, maro
El Ny famolavolana mamaly dia tena ilaina ankehitriny noho ny endrika samihafa izay hatrehan'ny mpampiasa avy amin'ny takelaka misy azy, ny findainy ary ny solosaina aza. Ity famolavolana mailaka amin'ny marketing amin'ny mailaka sy ny pejy fipetrahana ity dia zava-dehibe kokoa amin'ny fifandraisana omnichannel amin'ireo mpanjifanay.
Noho izany dia mila raisina am-pahamatorana ianao haka modely samihafa sakany samihafa ho tonga miaraka amina endrika tsara indrindra mety ireo takelaka misy ireo na ilay pejy fipetrahana izay hipetrahan'ireo mpanjifan'ny ho avy tianay hivadika amin'ny doka aminay amin'ny Google na Facebook
1 Volavola mamaly amin'ny marketing amin'ny mailaka
2 Famolavolana mamaly amin'ny pejy fipetrahana
Volavola mamaly amin'ny marketing amin'ny mailaka
Ny marketing amin'ny mailaka dia iray amin'ireo fomba hanambarana ny tolotra vokatra na ireo lahatsoratra vaovao noforonina tao amin'ny bilaoginay ka tery amin'ny lalindalina kokoa miaraka amin'ireo mpanaraka antsika rehetra.
Midika izany fa mamaly ireo takelaka ireo izy ireo dia azo jerena tsara avy amin'ny finday, takelaka na solosaina. Noho izany dia mila miezaka ny hanana fitaovana ilaina isika mba hifanaraka tsara ireo singa hita maso rehetra amin'ny famakiana mora ny gazety.
Ny hoe mamaly dia midika fa ny fampisehoana pejy amin'ny fitaovana samihafa dia marina foana. Manana izany fitaovana izany isika mailaka barotra izay manampy anay hizaha ny taratasim-baovao noforonina tamin'ny endrika samihafa ary manova ny soatoavina toy ny padding na ny sisiny mba hametrahana azy ireo tsara rehefa mihena ny sakany amin'ny browser.
Ao amin'ny famolavolana tranonkala miaraka amin'ny CSS "Media Queries" no ampiasaina hamolavola tranonkala iray araka ny endrika. Hatramin'ny 360px dia ho an'ny telefaona finday, ary manomboka amin'ny 360px ka hatramin'ny 650px dia afaka manamboatra fanovana ho an'ireo mpampiasa rehetra mijery ny tranokalanay avy amin'ny takelaka izahay.
Ny sasany amin'ireo fitsipika ho an'ny taratasim-barotra amin'ny mailaka dia:
Hierarchy fahitana madio: lohateny amin'ny H2 hamelana ny lahatsoratra amin'ny endrika fehintsoratra.
Loharano roa samihafa: iray ho an'ny lohateny ary iray ho an'ny lahatsoratra dia mahatonga ny bilaoginay ho vakiana tsara kokoa.
El fampiasana loko hanavahana lohanteny, lahatsoratra ary singa hafa: afaka mandeha tsikelikely amin'ny volondavenona mainty mankany amin'ny maivana kokoa isika.
Un CTA (Call to action) mazava sy manavaka: raha mena ny sary famantarana ny orinasanay, dia mety miloko CTA amin'ity loko ity raha miloko mifameno kosa ny ambiny.
Manome anao ohatra maodely iray tena tsara izahay famolavolana mamaly ao anaty gazety izay notontosain'i Filmin ary azonao jerena amin'ny sary natolotra. Hamafana ny typography amin'ny fotsy, ary ny soratra amin'ny volondavenona tena maivana fa mamela antsika hijery sary an-tsaina haingana ireo toerana samihafa izay asaina hamaky isika raha tiantsika. Ny CTA dia tsy hoe avy amin'ny tontolo hafa, fa manampy amin'ilay kisary fananahana izy io ary mahatonga antsika hahita izay miandry antsika.
Ny habaka sahaza amin'ny sisiny, fotsy no loko lehibe indrindra amin'ny soratra sy mifanaraka tsara amin'ny sary famantarana Amin'ny marika; voahodidin'io volondavenona io izay mampiavaka azy. Sary mahasarika maso izay mamaritra ny teboka ho an'ny newsletter izay manintona hatramin'ny fotoana voalohany. Ny elanelana koa dia tavela amin'ny sisiny mba tsy "hanina" ny sakan'ny efijery manontolo.
Ao amin'ny Ny kinova amin'ny birao dia mitazona ireo fitsipika ireo, na dia mamela toerana bebe kokoa aza ao amin'ireo lahatsoratra ary mamela sisiny lehibe amin'ny lafiny roa:
Famolavolana mamaly amin'ny pejy fipetrahana
ny toro lalana mitovy amin'izany dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana mamaly pejy fitobiana. Tena zava-dehibe tokoa ny maka ny fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao mba hisafidianana araka ny tokony ho izy ny modely sy hanarahana fitsipika sasany ao anaty famolavolana:
Tsotra amin'ny fahitana: Miresaka momba ny fitazonana ireo banga foana izahay mba hametrahana ny fifantohana amin'ny CTA.
Sary mahafinaritra sy mahasarika ho an'ny mpamaky, tsy manadino ny vahaolana ary tonga lafatra izy ireo.
Ny maha-zava-dehibe ny loko ary hamafisinay indray.
Tokony hiasa amin'ny famolavolana pejy fandraisana ho an'ny finday, takelaka ary birao isika. Raiso ny fotoana ilaina hanaovana fitsapana hatrany hatrany isaky ny miova hita ao amin'ireo endrika telo ireo izy, satria afaka matoky ny tenantsika isika ary manadino fa ireo fanovana natao tamin'ny CSS ireo dia toa mahatsiravina amin'ny finday.
Pejy fitobiana Hotjar
Ny asa dia mety mandreraka, fa tena ilaina ny manokana fotoana hitsapana ny fiovana tsirairay. Ny fampiasana sisiny sisiny ary andramo, araka izay tratra, ny tsy manadino ireo lalàna ao amin'ny CTA na bokotra fihetsika:
fa ny halavirana mifandraika amin'ny lahatsoratra sy ny sisin'ny bokotra dia mandroso amin'ny endrika telo. Sady tsy kely no tsy lehibe ary mitovy haavo ny haavony.
La refy amin'ny haben'ny bokotra CTA miaraka amin'ny ambiny amin'ireo singa izay misy azy dia tsy maintsy omena.
Ohatra iray mazava amin'izany ny ny asa vitan'i Shopify amin'ny pejin-tranonao amin'ny birao sy izay ahitanao ny kinova finday. Ny fiheverana ny fampiasana loko, habaka fotsy ary ireo lahatsoratra misy ny habeny sy ny typografika mifanaraka aminy:
Soso-kevitra maromaro hananana pejy fipetrahana tsaratsara kokoa ho an'ny orinasanao na fivarotana an-tserasera ary ireo taratasim-baovao ireo izay zava-dehibe tokoa hahazoana ny fanavaozana sy ireo fampirantiana ireo ho an'ny mpampiasa anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Fandinihana ireo tompony amin'ny famolavolana mamaly amin'ny marketing mailaka sy ny pejy fipetrahana
Mamorona sary miaraka amin'ny effets Glitter